Rihanna မကြာခင်မှာပဲအမေ? မေးခွန်းတစ်ခုကိုသူ၏ရိုးရှင်းသောအဖြေ - TELES RELAY
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် Rihanna မကြာခင်မှာပဲအမေ? သူ၏မေးခွန်းကိုသူ၏ရိုးရှင်းသောအဖြေ
Rihanna အမေ၊ မကြာခင်တွေ့မယ်လား အင်တာဗျူးပေးခြင်း အန္န Wintourအယ်ဒီတာချုပ်ရဲ့မေးခွန်းကအမေရိကန်အဆိုတော်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တယ် Vogue သူ့ကိုမေးခဲ့တယ် Hilare, လက်ရှိနှင့်ဆက်ဆံရေး၌သူတ ဆော်ဒီဘီလျံနာ Hassan Jameel ကံကြမ္မာကို၎င်း၏နေရာတွင်ရွေးချယ်လိမ့်မည်ဟုရိုးရှင်းစွာညွှန်ပြ, ထိတွေ့ကန် “ ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်မစဉ်းစားပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော့်အတွက်ရွေးချယ်လိမ့်မယ်” သူမ ဒီမေးခွန်းကိုအံ့အားသင့်သွားပြီး Rihanna ကသူမရဲ့အဖြေကလူမှုကွန်ယက်တွေပေါ်မှာဆူညံသံတွေအများကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်လို့အကြံပြုလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် ကိုယ်ဝန်အားလုံးကောလာဟလ ဒီအင်တာဗျူးပြီးနောက် ".
Rihanna ၏ထူးခြားသည့်တုံ့ပြန်မှုသည်အဆိုတော်၏ပရိသတ်များကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သည် ဘုရားသခငျ၏တ Plan ကိုအကြီးမားဆုံး hits တစ်ခု၏ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ် de Drake။ 2017 နှင့်ကွဲသွားသောအချစ်ငှက်နှစ်ကောင်သည်အတူတူရှစ်နှစ်နေထိုင်ခဲ့သည်။ ဒီသီချင်းဟာတဘီလီယံကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီ။ ဤအသုံးအနှုနျးအသုံးပွုခကျြမှာသတငျးမြားတှငျပါဝငျသညျ၊ Rihanna နေဆဲ pinching ဖြစ်ပါတယ် သူ့ဟောင်းအတွက်.
ပြီးခဲ့သည့်နွေ ဦး ရာသီကလည်း Rihanna ကပြောကြားခဲ့သည် သူမသည်မကြာမီသွားခဲ့ပါသည်Hassan Jameel လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်။ ဘာသာပြန်သူ Anna Wintour မှမေးမြန်းခံရသည့်အခါ စိန်ပွင့် သူမသွားခဲ့သည်ဟုဆိုသည် "အများဆုံးဖွယ်ရှိ" သူမ၏မင်္ဂလာဆောင် ၀ တ်စုံကိုသဘောပေါက်သူအားအပ်နှင်းပါ ယောဟနျသ Galliano။ ဖြစ်ဖို့အာမခံချက် "မင်္ဂလာ" Rihanna သည်သူမ၏ဘ ၀ တွင်တရားအားထုတ်ရန်အခွင့်အလမ်းနည်းသောစုံတွဲကိုပျော်မွေ့ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ "ငါအချိန်အတန်ကြာသီးသန့်ဆကျဆံရေးနထေိုငျပြီးတော့ဒါကအရမ်းကိုကောင်းတာပေါ့။ ငါတကယ့်အပြောင်းအလဲကိုခံစားခဲ့ရတယ် ".
Ed Sheeran ကတော် ၀ င်မှုကိုဂျင်းအတွက်တိုက်ထုတ်ဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါမင်းသားဟယ်ရီအံ့သြသွားတယ်